स्टीफन कि Kingले 'बेक्का पाल्सन' को खुलासा CW मा हेड गरे
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	स्टीफन कि Kingले 'बेक्का पाल्सन' को खुलासा CW मा हेड गरे
by Waylon जोर्डन जुलाई 21, 2020
by Waylon जोर्डन जुलाई 21, 2020 1,180 हेराइहरू
CW ले अनुकूलन अधिकार लिईएको छ स्टीफन किंगको छोटो कथा "शीर्षक 'Becka Paulson का काम" शीर्षक शीर्षक अन्तर्गत खुलासा अन्तिम रेखा अनुसार.
दुर्घटनावश आफूलाई न n्ग बन्दुकले मस्तिष्कमा गोली हान्न पछि, एक Pollyanna-ish Becca पॉलसन एक अत्यधिक यो द्वारा मा आफ्नो साथीलाई रोक्नको लागि "चुनेको" हुन भर्ती भयो। विश्व बचाउने क्रममा, बेक्काले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि हाम्रो गहिरो पछाडि रहेको ग्रह पृथ्वी उद्धार योग्य छ - उनको अर्घ्य मध्यपश्चिम गृहनगरबाट शुरू गर्दै।
माईसी कुल्भर (अन्तिम म्यान स्ट्यान्डिङ) राजाको कहानीमा आधारित श्रृंखला लेख्न सेट गरिएको छ, र केटि लभजो एक कार्यकारी निर्माताको रूपमा काम गर्ने छन्।
कथा मूल रूपमा एउटा अंकमा प्रकाशित भयो रोलिंग स्टोन १ 1984। 1990 मा फिर्ता र XNUMX को संस्करण को एक एपिसोड को लागी स्रोत सामग्री को रूप मा प्रयोग भएको थियो बाहिरी सीमा (माथि चित्रित)। त्यो एपिसोडले क्याथरिन ओ'हारा तारांकित गर्‍यो (स्किटको क्रिक), जोन डिहल (स्टर्जेट), र स्टीवन वेबर (यो चम्काउने मिनी-श्रृंखला)। वेबरले एपिसोड निर्देशित पनि गरे।
राजाको संग्रहमा यो कहिले सम्मिलित नभए पनि यो उनको उपन्यासमा सबप्लोटको रूपमा रूपान्तरण गरियो यो Tommyknockers.
यो देख्न चाखलाग्दो हुनेछ कि कुल्भरले छोटो कथालाई कसरी श्रृंखलामा विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ, यद्यपि यसको वर्णनमा निस्सन्देह धेरै सम्भावनाहरू निर्मित छन्।
iHorror ले तपाईंलाई पोष्ट गर्नेछ खुलासा थप विवरणहरू उपलब्ध हुने क्रममा।